Mootummaan naannoo Amaaraa 'dhimma kana gara hin taanetti adeemsisaa jira' - BBC News Afaan Oromoo
Mootummaan naannoo Amaaraa 'dhimma kana gara hin taanetti adeemsisaa jira'
26 Muddee 2019
Madda suuraa, Ustaz Kamil Shamsu/Facebook
Masjiidonni afur gubachuufi sana hordofuun hiriirawwan nagaa bakka adda addaatti taasifamaa jiruuf mootummaan naannichaa xiyyeeffannaa barbaachisu kennaa hin jiru jedhan Ustaaz Kaamil Shamsuu.
Naannoo Amaaraa, Godina Gojjaam Bahaa, magaalaa Mooxaatti Jimaata darbe masjiidonni afur dabalatee dhaabbileen daldalaa gubatanii turan.
Gocha kana balaaleffachuun magaalota gurguddoo akka Jimmaa, Baalee Roobee, Harariifi kanneen biroo keessatti hiriirri baahamaa jira.
Poolisiin naannichaa ammoo shakkamtoota 20 ol to'annoo jala oolchee qorachaa akka jiru beeksiseera.
Haata'u malee, wanti mootummaan naannichaa godhe gahaa miti jedhu barsiisaan amantaafi falmaa mirga amantaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu.
"Mootummaan naannichaa dhimma kana dafee qoratee kallattii barbaachisu hin kennine," jedhu.
Inumaa "dhimma kana gara hin taanetti adeemsisaa jira," jechuun komatu.
Haleellaa naannoo Amaaraa Moxaan walqabtee namoonni 22 to'annoo jala olfaman
Masjiidonni kunneen osoo hin gubatiin dura wanti kun akka uumamu mallattooleen mul'ataa turan kan jedhan Ustaaz Shamsuun, dhimma nageenyaa naannichaa dabalatee aanga'oota adda addaaf bilbilamee akka ture himu.
Erguma rakkinichi mudatees, masjiidni tokko yoo gubatu kan lammataa akka hin dabalamne tarkaanfii ariifachiisaa fudhachuu danda'u ture jedhu.
Kana malees hiriirawwan balaaleffannaa iddoowwan adda addaatti taasifamaa jiraniifis xiyyeeffannaan mootumaa naannichaa kenne gadi aanaa ta'uu dubbatu.
Mootummaa naannoo qofa osoo hin taane mootummaan Federaalaas xiyyeeffannaan dhimmichaaf kenne gadi aanaadha jedhu.
Miidiyaaleen mootummaa akka waanti tokko hin uumamneetti dhimmicha callisaan bira darbuunis sirrii miti jedhan Ustaaz Kaamil Shamsuu.
Manni Maree Waliigalaa Dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa gubachuu masjiidotaafi manneen daldalaa naannoo Amaaraa godina Gojjam Bahaa magaalaa Moxaatti dhalatee ture balaaleffachuun ibsa geezexeessitootaaf kenneen gocha sana balaalleeffateera.
"Wanti uumame yakka faallaa seera amantaafi seera biyya lafaa ta'e kanaafi aadaa waliin jiraachuufi waliif yaaduu hanga ar'aatti biyya keenya keessattis ta'e naannicha keessatti ture gocha diigu kana irra deebiyee cimsee balaaleffata."
Manni Maree kun Bataskaana Ortodoksii Tewaahidoo Itoophiyaafi Yaa'iin Dhaabbileen Amantaa Itoophiyaa gochicha balaaleffachuun ibsa baasuuniifi bakka rakkoon qaqqabe deemuudhaan miidhaa qaqqabe ilaaluun hawaasa jajjabeessuu isaaniif galateeffataniiru.
Gara fuula duraatiif ammoo rakkoon walfakkaatu akka hin uumamneef itti-gaafatamummaa waloo keenyaa akka bahannu jechuun waamicha dhiyeesseera Manni Marichaa.
Manni Maree Waliigalaa Dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa ibsa isaa kanaan mootummaa naannoo Amaaraa gaaffii shan saffisaan akka deebisuuf maqaa Musliimota Itoophiyaatiin gaafateera.
Ka'umsa rakkoo uumameefi miidhaa qaqqabe qulqulleeffachuuf koree hundeeffameef tumsa barbaachisu akka taasisu
Gocha badii kana raawwachuurra darbee aadaafi safuu keenyaan ala haala ta'een namootaafi garee dhaabbilee amantaa gubanii dhaadannoo dhageessisaafi dhiichisaa turan saffisaan to'achuudhaan murteen malu akka kennamu akka taasisu
Kanneen qabeenyi jalaa manca'eefi miidhaan biroo irra gaheef beenyaa akka kennuufi dhifama akka gaafatu
Masjiidonni gubatan saffisaan deebisee iaarsisuudhaan tajaajila isaanii yeroo hundaa akka kennan akka taasisu
Walumaagalatti koreen rakkoo Musliimonni naannicha keessatti argaman qaban qulqulleeffatuufi hiiku yeroo gabaabaa keessatti hundeeffamee hojiitti akka seenu akka taasisu irra deebiyuun yaadachiifna.
Qaamoleen mootummaa A L I hanga Sadaasa 22, 2019'tti gaaffilee kanneeniif deebii gahaa nuuf hin kennan taanaan gocha badii faallaa seera amanataafi seera biyya lafaa ta'eefi aadaa waldanda'uu biyyattii keessa ture diigu kana mormuudhaaf Finfinneetti hiriira waamuuf akka jiru mootummaaf gaaffii dhiyeesseera Manni Maree kun.
Dhaabbilee Barnoota Olaanoo Itoophiyaa: 'Ijoolluma dareetti waliin barannutu Maashoo gareedhaan ajjeesse'
9 Muddee 2019
Gargaaraan Komishinaraa Poolisii Naannoo Amaaraa to'annaa jala oolfaman
29 Fuulbaana 2019
Naannoo Amaaraa godina Saba Oromootti lubbuun namaa darbe
8 Onkololeessa 2019
Naannoo Amaaraa Godina Addaa Oromootti maaltu dhalate?
4 Ebla 2019
Naannoo Beenishaangul Gumuzitti nageenya fiduuf yaalii godhameefi danqaalee mudatan
Taalibaan Kora Waliigalaa UN irratti haasaa taasisuuf gaafate
Abbaafi haati warraa waggaa 75 waliin jiraatan garaagarummaa sa’aa muraasaan boqochuun raajii uume
US dubbii Diyaaqoon Daani'eel 'haasaan jibbinsaa hamaadha' jechuun balaaleffatte
Paartileen dabalataa lama filannoo Naannoo Somaalee keessaa of baasan
Yaman bakka Doonaald Tiraamp fi mootiin Sa'uudii hin jirretti du'a itti murteessite
Yeroo dhuma kan haaromfame: 22 Guraandhala 2019
Haadhaafi ilma walarguuf waggaa 58 eegan
Sudaan yaalii fonqolcha mootummaaf deeggartoota al-Bashir himatte
Yeroo dhuma kan haaromfame: 20 Adooleessa 2018